ड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए । बसमै देखेर लभ पर्यो…. (भिडियो हेर्नुस) – Khoj Dainik
November 6, 2020 adminLeaveaComment on ड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए । बसमै देखेर लभ पर्यो…. (भिडियो हेर्नुस)
सिन्धुपाल्चोकका सुजन बाबु गुरुङको जीवन केहि दिनअघिसम्म सामान्य थियो । आफ्नो गाउने कलालाई दबाउँदै उनी दैनिक बुढानिलकण्ठ रत्नपार्क रुटको गाडी चालकको रुपमा आफ्नो जीविको चलाउँदै थिए ।
त्यसैबिच २३ बर्षका सुजनको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आयो, जब उनको बारेमा थाहा पाएर कलाकार सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी उनको प्रतिभाको भिडियो बनाए । ११ बर्षको उमेरमा गरिवीले पिरोलेपछि काठमाडौंमा आएर अनेकौं सँघार्ष गरेका सुजनको जीवन कथाले सबैलाई रुवायो र उनको कलाले सबैको मन लोभ्यायो । सबैको माया पाएपछि शिशिरले पहिलो अन्तर्वार्तामै गरेको बाचा पुरा गरे ।
यसैबिच बस चालक सुजन बाबू गुरुङ भाईसँग बसमै शताव्दिकाको नजर जुद्छ, भाईको बोली र बानीले युवती मोहित हुन्छिन् र उनीहरु बिच प्रेम बस्छ । सधै गाडी चढ्ने क्रममा माया बढ्दै जान्छ । यो सुजन भाईको दोस्रो गीत ‘एक झल्को’को कथा हो । कसरी बस्छ प्रेम ? के उक्त प्रेम सफल हुन्छ ? गीतको छायाँकन कसरी भयो ? सुजनले हालसम्म कति गीत गाए ? *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
नायिका श्वेता आफुभन्दा धेरै कान्छा युवकसँग बिवाह गर्दैछिन कुरा खास के हो ?
सिन्धुपाल्चोकमा भेटियो दूध दिने सिँधुरे गोरु; हेर्नुस् यसरी दिन्छ दुध (भिडियो सहित